Iphela, isoftware apho ubukrelekrele bokusebenzisa bunokusebenzisa ikhompyuter | Iindaba zeGajethi
Namhlanje, ngaphandle kwenqanaba elidumileyo, akukho mntu waziyo ngokuqinisekileyo ukuba isebenza njani ialgorithm. ingqiqo okanye yenziwa njani, inyani kukuba siziqhelanisa nokusebenza nabo yonke imihla sibulela ekusebenziseni kwabo izicelo ezahlukeneyo ezinje ngelebheli yokuzibhalela ye-Facebook okanye ezithandwayo bots Ucingo oluya kuthi, njengoko uqinisekile, lusivumele ukuba sifake ii-GIFs kwincoko.
Nangona inyani kukuba ngalo mzuzu obu buchwephesha butsha bushiya ngaphezulu ukuba bunokunqweneleka kunokuba bunokubonelela, inyani yile qhubela phambili kwaye uguquke ngokuxhuma kunye nemida. Unobungqina bento endiyithethayo kwinkqubela phambili ephuhliswayo I-OpenAI apho, njengoko kuchaziwe Quartz, Ndiphuhlise iqonga elitsha phantsi kwegama le Ehlabathini apho inkqubo yobukrelekrele bokuzenzela inakho ukusebenzisa iPC njengaye nawuphi na umntu.
I-OpenAI, enkosi kwiprojekthi yendalo iphela, ifuna ukwenza ubukrelekrele bokufakelwa buxhomekeke kakhulu.
Uluvo, ubuncinci yile nto ivela kwingxelo engaqhelekanga kwaye inzima, kukuba inkqubo yobukrelekrele bokufakelwa iyakwazi ukusebenzisa uhlobo lwempuku kunye nebhodi yezitshixo kwaye ikwaqwalasele okubonisiweyo kwiscreen sebenzisana nePC ngendlela efanayo nayiphi na kuthi.
Esi sixhobo sitsha senza uhlobo oluthile lophando kubukrelekrele bokuzenzela obaziwa njenge 'ukomeleza ukufunda'. Ngale ndlela, ialgorithm inokufunda kwiimpazamo zayo ngokusebenzisa iibhiliyoni zokuphindaphinda. Ngokusisiseko sifuna ukufezekisa oko, enkosi kwi-Universe, inkqubo yobukrelekrele bokuzenzela inakho, umzekelo, khangela ulwazi kwi-intanethi o dlala umdlalo online, ngendlela efanayo ukuba umntu unako.
Njengoko kuphawuliwe U-Ilya SkutseverUmlawuli woPhando nge-OpenAI:
Isakhono esiphambili esingathanda ukuba iinkqubo zethu zobukrelekrele bube nazo kukusombulula ingxaki ngokubanzi. Ngale ndlela unokuthatha ialgorithm kwaye uyibeke kwihlabathi elitsha, apho iya kuthi iqonde ukuba kwenzeka ntoni, fumana ukuba wenzeni emva koko uyenze.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Iphela, isoftware apho ubukrelekrele bokusebenzisa bunokusebenzisa ikhompyuter